Vidio na-abịa na ìhè na-egosi One UI 2.0 na gam akporo 10 | Gam akporosis
Otu UI bụ tupu na mgbe maka Galaxy na interface na-enye obi ụtọ ịkwaga ya. Ugbu a ọ bịawo n’ìhè ihe ga-abụ ụdị ndị nrụpụta nke na-egosi ụdị nke ọhụrụ Otu UI 2.0 na gam akporo 10.
Nyaahụ anyị zutere otú Android agaghịzi eji aha eji megharịa ọnụ maka nsụgharị ha, ya mere anyị ga-aga nọmba dị ka otu UI 2.0. Ntughari ohuru nke agagh adi oke mgbanwe dika nke mbu, mana nke na-eweta ihe ya.
1 Site na TouchWiz gaa Otu UI
2 Ihe mbu gi
3 Ntugharị igagharị ọzọ maka UI
Site na TouchWiz gaa Otu UI
Samsung's TouchWiz bụ akwa oyi akwa dị mkpa nakwa na ọ nwere ihe karịrị ihe a kpụrụ akpụ. O nwere ezigbo ihe, mana ọ rụghị dị ka a ga - asị na ọ na - eme gam akporo nke nwere ụdị 5.0 bidoro iwepụta ya.
Otu UI bụ akụkụ ahụ nke ọtụtụ hụrụ n'anya ruo mgbe ebighi ebi na nke ahụ n'oge anyị shelled iji gosi ụfọdụ n'ime atụmatụ ya kachasị mma. Ọ bụ ugbu a youtuber Dudu Rocha onye egosila ozi izizi na vidiyo nke ahụ ruru ụdị 2.09 nke Otu UI na gam akporo 10. Bịanụ, ihe ọhụụ iji hụ ihe ga-abịakwute anyị na mmelite na-esote.
Mmetụta mbụ ọ na-enye bụ na ọ dị ka ọ dị na e nweghị ọtụtụ akụkọ. Ihe ezi uche dị ka nke a bụ ụdị "na-aga n'ihu" nke One UI na nke ahụ ga-eweta nuances iji melite nnukwu ahụmịhe onye ọrụ nke Samsung na-enye.
Ihe mbu gi
Mgbanwe ndị mbụ anyị hụrụ bụ na ngalaba ntọala ngwa ngwa. A ntinye kacha mma na ụfọdụ ihe ndị ọzọ nke mere na anyị nwere ike iji otu aka iru ndị anyị ji. Anyị na-echekwa otu n'ime mpaghara kachasị eji na gam akporo.
Elekere ugbu a bụ obere obere na laghachi n'ọkwa ọkwa ya na ubochi dikwa obere. Usoro a na-emepe oghere na mosaics nwere ike ịmegharị ma si otú a na-eweta ihe niile masịrị onye ọrụ na-ejikarị aka ya ejiri aka ya ebido ụzọ.
Yabụ, ha na-ebuli ahụmịhe interface na ihe bụ dị jụụ iji hụ ka ọ si agbatị ma gbasaa ka anyị na-emegharị ogwe ogwe ruo mgbe anyị meghere ya kpamkpam. Ọ bụrụ na anyị na-ege ntị, anyị nwere ike ịchọta nkọwa nke na-egosi ogo nke ụlọ ọrụ Korea kwụrụ ụgwọ na interface ya.
Ntugharị igagharị ọzọ maka UI
Ọzọ dị mkpa mgbakwunye bụ ogbugbu usoro na Google abanyela na beta nke gam akporo Q. A usoro nke mmegharị n'ike mmụọ nsọ site iOS na onye na-aga azụ na ndị na anyị na-ama na ama niile nke ala igodo mmanya.
Mmegharị ahụ nke ga-agba ume na-adịgide adịgide wepụ ihe nchọgharị mmanya nke mere na anyi ga echefu na onwere ohere n’ebe ahu. Anyị ga-ahụ otu Samsung si mejupụta mmegharị nke gam akporo 10 na nke ya. Ha ji ihe ijuanya nye anyị ihe.
Ọzọ ọhụrụ nke mbipute 2.0 bụ ngalaba ohuru a na-akpo Obodo na Nzuzo. Ọ na-egosiputa Njikọ Microsoft na ọrụ Windows na ihe bụ ederede ngbanwe nke ala na-eche na ọ ga-erute ekwentị ndị ọzọ na One UI; echefula aghụghọ ndị a iji melite ọdịyo na oyi akwa a.
O doro anya na mbipute a 2.0 na-eme ka ahụmịhe ka mma na-enweghị nnukwu ozi ọma ma ọ bụ mgbanwe. Ma ọ dịghị mkpa n'ezie ma ọ bụrụ na ọrụ dị oke mma emere na mbipute 1.0 yana na a ga-arụtụ aka na 2.0 a nke anyị na-amaghị mgbe anyị nwere ike ịnwale ya. Ugbu a ọ ka ga-ahụ mgbe Google gosipụtara gam akporo 10, yana na ọ hụchara ihe ekwuputara ụnyaahụ, ọ gaghị ewe izu.
una mbipute 2.0 nke Otu UI na gam akporo 10 sitere na Samsung nke ahụ ga-aga n'ihu na-agbakwunye mma na otu n'ime ahụmịhe kachasị mma nke onye ọrụ nwere ike ịnweta ugbu a na ekwentị ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Kedu ihe ga-abụ nsụgharị 2.0 nke Otu UI na gam akporo 10 si Samsung na-abịa n'ìhè